Etazonia: Herinandro Ho An’ny Tantaran’ny Hazondrongony, Mamonjy Zanakazo Sy Planeta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2017 18:18 GMT
Ireo karazan'endriky ny rongony. Ny C. sativa (havia) irery ihany no mety amin'ny hazondrongony voaodina, saingy manana karazany fatao fanafody ihany koa izy.
Anatinà vanim-potoana sarotra ara-toekarena, inona no antony mety handraràna ny fambolena mitodika amin'ny indostria ny zanakazo iray tena ilaina sy ahazoana tombontsoa, izay saika tsy mila fanafody famonoana bibikely ary azo ampiasaina anamboarana lamba, sakafo, sakafom-biby, sady azo asolo ny solitany, ny landihazo, ary ny hazo fanamboarana taratasy?
Raha antsoina hoe “hazondrongony” (Cannabis genus) io zanakazo io, mifandray amin'ny pôlitika tanteraka ny antony tsy maha ara-dalàna azy any Etazonia. Misy karazany sasany amin'io zanakazo io afaka ampiasaina hamokarana rongony, zava-mahadomelina malefaka fa indrindra tsy ara-dalàna, izay irian'ny ankamaroan'ireo mpanao pôlitika halavirina ny tenany.
Ny Hemp History Week (Herinandro ho an'ny Tantaran'ny Hazondrongony) natao ny 17 ka hatramin'ny 23 Mey 2010 dia hetsika iray nokarakarain'ny Hemp Industries Association (Fikambanan'ireo Orinasa Mpanodina Hazondrongony) sy ny VoteHemp (Fidio Ny Hazondrongony) entina hanazavana ireo tombontsoa maro azo avy amin'ny famadihana ny famokarana hazondrongony ho ara-dalàna any Etazonia. Ara-dalàna ny fambolena hazondrongony any amin'ireo firenena maro, ary ara-dalàna koa izany teo aloha tany Etazonia.
Manararaotra tanteraka ireo fitaovana ao anaty aterineto sy ny mediam-bahoaka io hetsika manontolo io mba hanosehana ny fanalàna ireo sakana amin'ny fambolena mitodika amin'ny indostria ny hazondrongony any Etazonia amin'ny alàlan'ny fanabeazana, ny lalàna ary ny fisoloana vava. Fanjakana 16 fotsiny no nandany ny lalàna manohana ny fambolena hazondrongony hatreto. Mangataka ireo mpanohana ny Hemp History Week mba hanasonia sy handefa karatra pôstaly mampirisika ny Filoha Obama sy ny Minisitry ny Fitsarana, Holder, mba hanova ny pôlitika federaly, ary mikasa ny hikarakara eo amin'ny hetsika 200 eo manerana ny firenena ireo mpanohana ireo hatreto.
Hita anatin'ity lahatsary ao amin'ny fantsona YouTube an-dry zareo ity ireo tafatafa miaraka aminà olo-malaza (tahaka ny Dr. Andrew Weil) izay manazava ny antony tokony hisianà lalam-barotra mitombo ho an'ireo vokatra hazondrongony voaodina:
Inty misy sary iray monja avy amin'ireo sary maro nalefa ho an'ny mari-pankasitrahana “Ianao + Toerana Manan-tantara”:
Pôketra Hemptress: Andron'ny Tany 2010. Nalefan'i Arlene Nilsson
Ao amin'ny Facebook, manana mpankafy maherin'ny 1.000 ny pejin'ny Herinandro ho an'ny Tantaran'ny Hazondrongony, raha manodidina ny 6.500 kosa ireo olona “tia” ilay pejy VoteHemp mifandray aminy. Miaraka amin'ireo fanehoankevitra sy sosokevitra samihafa, mizara torohevitra tena ilaina ihany koa ny olona, tahaka ity:
Mitady izay hatao sakafo atoandro? Mandalova ao amin'ny New Seasons Market ao amin'ny toby fiantsonana ao Orenco ary mangalà santionanà sakafo vita amin'ny hazondrongony ho fanomezam-boninahitra ny Herinandro ho an'ny Tantaran'ny Hazondrongony manomboka amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora hariva.
Maro ireo olom-pirenena mitoraka bilaogy sy mibitsika momba ilay hetsika, sy mizara izay kely fantany momba ny tantaran'ny hazondrongony ao an-toerana. Milaza ny bilaogy Outta the way fa:
Tao amin'ny fanjakan'i Pennsylvania, indrindra tao amin'ireo vondrom-piarahamoninà mpamboly tao amin'ny fivondronan'i York sy Lancaster, tena raharaham-barotra lehibe ny hazondrongony tamin'izany. Noho ny fanakekezan'izy ireo ny renirano Susquehanna, lasa ivon'ny fambolena hazondrongony tao Pennsylvania ireo fivondronana roa ireo. Namboly hazondrongony avokoa ny kaominina tao Lancaster, indrindra ny tao amin'ny Kaominin'i Hempfield. Teo anelanelan'ny taona 1720 sy 1870, maherin'ny 100 ireo trano fitotoam-boa tao amin'ny fivondronan'i Lancaster izay mikarakara ireo kiran'ny hazondrongony. Nampiasaina hanampiana ny rakotr'ireo sarety Conestoga maro, izay namboarina tao amin'ny tanàna kelin'i Conestoga, ao Pennsylvania io kira io.
Raha sanatria tsy fantatrao, araka ny Herinandro ho an'ny Tantaran'ny Hazondrongony, “nandray anjara mavitrika sy miaro mibaribary ny indostria fivarotana hazondrongony i George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Henry Ford sy ireo Amerikana malaza maro hafa”, raha namboly hazondrongony tany amin'ny toerana fialany sasatra tao Monticello kosa i Thomas Jefferson”. Raha tsy ampy handresen-dahatra anao ny amin'ny fomba an'arivony ampiasàna ny hemp izay miaro ny planeta ny resabe rehetra manodidina azy, misy ihany koa aza ireo loharano sy sosokevitra marobe hanaovana hetsika ao anaty aterineto ho fanohanana ny fambolena hazondrongony maneran-tany.